I-Nikon D3100 yeeDummies Cheat Sheet
Nge-D3100, uNikon uyangqina kwakhona ukuba awunyanzelekanga ukuba unike ingalo nomlenze- okanye uxinzelele umqolo nentamo yakho - ukonwabela ukufotwa kweDSLR. Olu kongezo kusapho lakwaNikon lwe-dSLRs alwenzi skimp kumandla okanye ekusebenzeni, ukubonelela ngeseti enkulu yeempawu zokukunceda uthathe ukufota kwakho ukuya kwinqanaba elilandelayo. Ukukunceda ukuba uqalise ukusebenzisa ikhamera yakho ye-D3100, sikunike isikhombisi esisebenzisekayo kumaqhosha ekhamera kunye nokudayela kunye neendlela ezizenzekelayo nezibonakalayo zokuvezwa.
Yazi uLawulo kwiKhamera yakho yeDijithali yeNikon D3100
Nasi isikhokelo esikhawulezayo sesalathiso kumaqhosha, ukucofa, kunye nolunye ulawulo lwangaphandle kwi-D3100 yakho. Qaphela ukuba ilensi ebonisiweyo yimodeli yeNikkor 18-55mm AF-S DX (Ukuncitshiswa kwentshukumo) ethengiswe ngekhithi ye-D3100; ezinye iilensi zisenokungabi nolawulo olufanayo.
Isikhokelo esikhawulezileyo seemowudi zokuBhengeza ngokuzenzekelayo kwiNikon D3100 yakho
Kubantu abatsha kwiikhamera zedijithali ze-SLR, i-D3100 ibonelela ngolu seto oluzenzekelayo lulandelayo olwenza ukuba inqaku kunye nokufota kufotwe. Ukufikelela kwiimowudi ngaphandle kwe-Auto kunye ne-Auto Flash, cwangcisa imowudi yokudayela kwi-Scene. Ukubeka iliso emva koko kubonisa uluhlu lweendlela ze-19 ezikhoyo zeMovie; ezi zidweliswe apha zimele ezo uya kuzifumana ziluncedo rhoqo.
Iimowudi zokuBonakalisa eziPhambili zeNikamera yakho yeDijithali ye-Nikon D3100
Ukuthatha ngenene ulawulo loyilo ngeNikon D3100 yakho, nyathela uye kwezi ndlela zine zokuvezwa, ezikuvumela ukuba uhlengahlengise ukuvula (f-stop) ukuze usebenze ubunzulu bentsimi (indawo egxile kuyo) kunye nokulungisa isantya se-shutter ukumisela ingaba izinto ezihambayo zibonakala zijolise ngqo okanye zilufifi. Ukwafumana ukufikelela kwezinye izinto ezingafumaneki kwiimowudi ezizenzekelayo, ezinjengokhetho lokuhlengahlengisa amandla e-flash kunye nokulungelelanisa okumhlophe.
loluphi olu nyango
amayeza ajika umchamo weorenji
iziphumo ebezingalindelekanga zabantwana
yintoni i-gabapentin ye
ndingathatha i-midol kunye ne-ibuprofen